SONATA-CANTATA: August 2008
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ဘာမှမလုပ်ချင် မကိုင်ချင်ဘူး
စိတ်ထဲကတော့ လုပ်ချင်တာတွေ တခုပြီးတခု
မခံစားနိုင်တော့ဘူး ရင်ထဲက လှိုက်ဖိုမောတဲ့ ဒီဒဏ်
ဟူး… စောင့်မျှော်ရတဲ့ အလုပ် တကယ်မောပါလား
ဒီကြားထဲကပဲ တစ်ကိုယ်တော် အလိုလို ရယ်ချင်နေမိသေး
ခြေတွေ လက်တွေ မသယ်ချင်တော့ဘူး
အီးးးးယားးးးးးးးး (မြန်မာလို cheers!!!!!!!!)
(အမေ့ကို လေဆိပ်မှာ သွားကြိုတာ)
လူအုပ်ထဲက လူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။
မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ခရီးတစ်ခုကို ချီတက်နေတဲ့
လောကကြီးထဲက လူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။
နံနက်ခင်းရဲ့ နေခြည်နုနုလေးကို ခံစားတယ်။
ကျေးငှက်လေးတွေရဲ့ တေးသီသံကို သာယာတယ်။
မိုးစက်တွေ ထိမှန်ထားတဲ့ မြေသင်းရနံ့ကို ရှူရှိုက်တယ်။
အိပ်မက်ရထားနဲ့ ကြယ်တာရာတွေဆီလည်း ခရီးနှင်တယ်။
လောကကြီးကို ငါ့ရဲ့ ပြူတင်းတံခါးတွေကနေ သိရှိခံစားတယ်။
ကြယ်တာရာတွေရဲ့ အလယ်မှာ ရှိနေခဲ့ဖူးတယ်။
တကယ်တော့ ငါဟာ …
ငါ့ရဲ့ ပြူတင်းတံခါးတွေကနေ ပစ်လွှတ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့
ငါသာ မရှိခဲ့ရင် …
နေရောင်ခြည်တွေလည်း သာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျေးငှက်တွေလည်း တေးသီမှာ မဟုတ်ဘူး။
လောကကြီးတစ်ခုလုံးတောင်မှ ဖြစ်တည်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ငါ့အတွက် ငါဟာ လောကကြီးနဲ့အတူ တည်ရှိနေတယ်။
ငါဟာ ငြင်းပယ်လို့မရတဲ့ အမှန်တရားဖြစ်တယ်။
မင်းရဲ့ ပြူတင်းတံခါးတွေကနေ ဆွဲထုတ် ဖန်ဆင်းခဲ့လို့ …
အနှစ်မဲ့ ဟင်းလင်းပြင် တစ်ခုသာဖြစ်တယ်။
မင်း တည်ဆောက်ထားတဲ့ လောကကြီးရဲ့…
ပုံရိပ်တစ်ခု, အိပ်မက်တစ်ပုဒ်သာ ဖြစ်တယ်။
ဖတ်ရှုခံစားရင်း ငိုကြွေး, ရယ်မောလိုက်နဲ့
ဘတ်စ်ကားပေါ် တိုးဝှေ့တက်နေတဲ့ လူအုပ်ထဲမှာ၊
မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ရုန်းကန်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးထဲမှာ၊
သေခြင်းတရားဆီကို တရွေ့ရွေ့ခရီးနှင် နေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ၊
မင်းရဲ့ ရှုးသွပ်မှုကို မေ့လျော့နေခဲ့တယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြီးဆုံးအောင် မရေးနိုင်သေးတဲ့ စာတမ်းတစ်ခု အတွက် အဓိကရေးချင်တဲ့ အကြောင်း အချက်တွေကို ခပ်တိုတိုပဲ ကဗျာပုံစံနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူး ခဲ့ပါတယ်။
(၁) ပုထုဇဉ် = လူတွေထဲက လူ
(၄) ငါ = လောက
(၅) ငါ = Nothingness
(၆) ငါ = အထင်
(၇) ပုထုဇဉ် = အရူး
ဆိုတဲ့ အချက် (၇) ချက်ကို ရေးထားပါတယ်။
photo slide show လေးတင်ချင်လို့ flickr account က ပုံတွေကို တင်တာ အဆင်မပြေပဲ post အဖြစ်တက်သွားလို့ delete ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ link ချိတ်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ sorry နော်။
very sorry ပြောပြီးပြေးလည်း
Postcard ပေါ်က မောင်ပန်းမွှေးရဲ့ ကဗျာလေး လိုပေ့ါနော်...
ဤမိသားစု၌ အထိမ်းအမှတ်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း အလေ့အထ မရှိသော်လည်း ၀ါဆိုလဆန်း (၆)ရက်နေ့တွင် မွေးသော အဖေသည် ထိုရက် ၀န်းကျင်၌ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ရန် စီစဉ်လေ့ရှိသည်။ ပြာသိုလထဲ မွေးသော အမေ မှာတော့ သူ့မွေးနေ့ကို မသိရှာပါလေ။
ဤမိသားစု၌ ပထမဆုံး မှတ်မှတ်ရရ ကျင်းပသော မွေးနေ့ပွဲမှာ စတုတ္ထမြောက်သား၏ (၂၅)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဖြစ်သည်။ တစ်ခုသော မေလ၏ တတိယပတ် စနေနေ့တွင် ဖြစ်သည်။ မွေးနေ့ရှင်၏ အစီအမံအတိုင်း ပင့်သံဃာ (၂၅)ပါးကို နေအိမ်၌ နေ့ဆွမ်း ဆပ်ကပ်ပြီး ပိဋကတ်သုံးပုံ စာအုပ် တစ်စုံ သံဃာအား လှူဒါန်းသည်။ သူ၏ သူငယ်ချင်းများ ယောက်ျားလေးရော၊ မိန်းကလေးပါ စုံစုံညီညီ တတ်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ မွေးနေ့ရှင်က သူ Scholarship ဆုကြေးရထားတဲ့ စုငွေတွေနဲ့ ဒီပွဲကို စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဆိုဘဲ။
သူ့အောက်က ညီမလည်း ရှေ့က ဥပမာကောင်းကို အားကျလေတော့ သူ့မုန့်ဖိုးတွေကို ကြိုစုလေသည်။ နောက် လေးနှစ်အကြာ မတ်လ၏ တတိယပတ် စနေနေ့တွင် သူ့ရဲ့ (၂၅)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို ရှေးနည်းအတိုင်း သံဃာ (၂၅)ပါးကို နေအိမ်သို့ ပင့်ဖိတ်၍ နေ့ဆွမ်း ဆပ်ကပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပိဋကတ်သုံးပုံတော့ မပါနိုင်ရှာတော့။
သူ့အောက်က အငယ်မကလည်း ရှေ့က ဥပမာကောင်းများကို အားကျပါလေသည်။ သို့သော် … သူ့၌ စုငွေဆိုတာ ဗလာနတ္တိ။ (မိမိ)
ဤမိသားစု၌ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆပ်ကပ်သည့် အလေ့အထ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မပျက်ကွပ်သော်လည်း၊ ငွေရတု မွေးနေ့ပွဲလေးများ ကျင်းပခြင်းမှာမူ တပိုင်းတစနှင့် တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ် ခဲ့ရလေတော့သည်။
သားကြီး (၁၀)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရ
ဆွေမျိုးများနှင့် နီးနီးစပ်စပ် လက်ပွန်းတတီး နေထိုင်ခွင့် မရရှာသော သားတို့အတွက်
ဘဘဌေးနဲ့ ကြီးမိုးကို အတု ယူရမယ်နော်။ အစဉ်အလာကောင်းများ ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပါစေ။
“လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်သူများ” ဟူသော ဝေါဟာရကို တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအရွယ် ရောက်သည်အထိ မရင်းနှီးခဲ့သေးပါ။ နွေကျောင်းပိတ်ရက် အိမ်သို့ အပြန်လမ်း ရထားပေါ်တွင် မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံ၌ ထိုင်လိုက်လာသော ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့် စကားလက်ဆုံ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြသည်ကို အမှတ်ရမိသည်။ သူက လမ်းတစ်လျောက်လုံး အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထု တစ်ပုဒ်ကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်လိုက်လာခဲ့သည်။ ၀တ္ထုအမည်ကို မမှတ်မိတော့သော်လည်း စာရေးသူသည် Camu ဖြစ်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ “ဘာ စာအုပ်များလဲ”လို့ စကားစဖြစ်ပြီး ပန်းဆိုးတန်း စာအုပ် အဟောင်းဆိုင်များ အကြောင်း၊ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့ သူကသာ အာဘောင် အာရင်းသံသံနှင့် တစ်လျောက်လုံး ပြောသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဖြစ်တည်မှုဝါဒ (existentialism) အကြောင်းများကို အားပါးတရ ပြောသည်။ စင်စစ် ထိုစဉ်က ဖြစ်တည်မှုဝါဒဆိုသည်ကိုလည်း မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါးအချို့တွင် ဖတ်ဖူးရုံမျှသာသိ၍၊ ဂဃဏန မသိသေးပါ။ နောက်တော့ Atheist တွေအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြသည်။ ထို့နောက် သူကိုယ်တိုင်သည်လည်း Atheist ဖြစ်ကြောင်း ဆိုလာပါသည်။ “ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ - မရှိ” ဟုရေးထားသော သူ၏ မှတ်ပုံတင်ကပ်ပြားကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ထုတ်၍ ပြပါသည်။ သူနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းသည် တသက်တာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် “ဘာသာမဲ့”တစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်သည်။
နောက် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် လာရောက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရသောအခါ၊ “ဘာသာမဲ့” ဟူသော ဝေါဟာရထက် ပိုမိုယဉ်ကျေးသည့် “လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်သူ” အများအပြားကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ် တွေ့ကြုံရသည်။ သို့သော် မိမိအမြင်တွင် ထိုသူအများစုမှာ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်သူများဟု ခေါ်ရန် ခပ်ခက်ခက်ပင်။ အချို့သည် ပုံမှန်နေ့စဉ်ဘ၀တွင် ဘာသာတရားကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်း မရှိသော်လည်း၊ တစ်စုံတရာ ပြဿနာနှင့် ကြုံသောလျှင် Church သွား ဆုတောင်း၊ Temple သွား ဆုတောင်းကြသူများ ဖြစ်သည်။ အချို့လည်း ငယ်စဉ်ဘ၀ကပင် ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးအောက်တွင် ဦးနှောက် အဆေးခံ ထားရသူများဖြစ်၍၊ (ဘာသာတရားနှင့်ဆိုင်သော) ဘ၀ပြဿနာများကို စဉ်းစား ဝေဖန်ရကောင်းမှန်း မသိကြသူများ ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေး စာအုပ်ကြီးများပေါ် အခြေမခံသော်လည်း ဘ၀ပြဿနာတို့ကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားတွေးခေါ်သူ free thinker စစ်စစ် အချို့လည်း ရှိပါသည်။ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်သူပင်ဖြစ်စေ၊ လေးနက်သည့် အတွေးအခေါ်ကင်းမဲ့သူပင်ဖြစ်စေ ထိုသူတို့သည် ဘာသာတရား ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူဟု အမည်ခံထားသော သူတို့ထက် ပို၍ ကိုယ်ကျင့်သီလ, မေတ္တာ, ကရုဏာတရားတို့ ကောင်းမွန်ကြသူများလည်း ထုနှင့် ထေးပင်။
Freethinkers, Freethought စသော ဝေါဟာရတို့သည် ၁၇-ရာစု- ၁၈-ရာစုက အင်္ဂလန်နှင့် ဥရောပတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် Deism ခေါ် ဘာသာရေးအယူဝါဒ, ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။ သဘာဝလောကကြီးအား ဖန်ဆင်းသော ဘုရားသခင်ကို လက်ခံယုံကြည်သော်လည်း ကျမ်းစာ၊ ဘုရားကျောင်းတော် (Catholic Church)တို့ကို ဝေဖန်ကာ၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုကို အခြေခံသော အယူအဆဖြစ်သည်။ ၁၈၈၁ ခုနှစ်တွက် The Freethinker ဂျာနယ်စတင် ထုတ်ဝေခဲ့သောအခါ freethinker ဟူသော အသုံးတွင် ကျယ်လာခဲ့သည်။ နောင်တွင် မည်သည့် ဘာသာတရားကိုမျှ မယုံကြည်သူတို့က freethinker ဟုခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲလာကြသည်။ ထင်ရှားသည့် လွတ်လပ်စွာ တွေးသူတစ်ဦးဖြစ်သော Bertrand Russel က “On God and Religion” စာအုပ်တွင် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်သူတစ်ဦးဖြစ်ရန် သူ၏ အတွေးအခေါ်သည် အနည်းဆုံး မိရိုးဖလာအစဉ်အလာနှင့် မိမိ၏ ဆန္ဒာဂတိဟူသော တရားနှစ်ပါးမှ လွတ်လပ်ရမည်ဟု အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
ပါဠိဘာသာတွင် အက္ခရာတို့အား အသံဖြစ်ပေါ်ပုံကို လိုက်၍ သဒ္ဒဗေဒ (Phonology) အရ စနစ်တကျ စီစဉ်ထား၏။ က, ခ, ဂ, ဃ စသဖြင့် အက္ခရာစဉ်သည် ဌာန်၊ ကရိုဏ်း၊ ပယတ်၊ သုတိ၊ ကာလစသော အသံဖြစ်ပေါ်ရန် အားထုတ်မှု (articulation) ကို မူတည်၍ စီစဉ်ထားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ပါဠိဘာသာတွင် သရ (Vowel) ၈-လုံး၊ ဗျည်း (Consonants) ၃၃-လုံး စုစုပေါင်း အက္ခရာ ၄၁-လုံးရှိသည်။ ဦးစွာပထမ ( အ, အာ, ဣ, ဤ, ဥ, ဦ, ဧ, သြ) ဟူသော သရ-၈ လုံး၊ ထို့နောက် က အစ, မ အဆုံး ၅-လုံးလျှင် တစ်အုပ်စုစီ စီထားသော ၀ဂ် ခေါ် အုပ်စု ၅-စုရှိသည့် ၀ဂ်ဗျည်း (အုပ်စုရှိဗျည်း) ၂၅-လုံး၊ ထို့နောက် အုပ်စုဖွဲ့မရပဲ သီးခြားခွဲ ထားသော (ယ, ရ, လ, ဝ, သ, ဟ, ဠ, အံ) ဟူသော အ၀ဂ်ဗျည်း (အုပ်စုမဲ့ဗျည်း) ၈-လုံး ရှိသည်။
ဌာန်, ကရိုဏ်း, ပယတ်
သဒ္ဒဗေဒတွင် လည်ချောင်း, အာခေါင်, အာထိပ်, သွားရင်း, နှုတ်ခမ်း စသော အသံဖြစ်ပေါ်ရာဌာန (Place of Articulation) ကို ‘ဌာန်’ ဟုခေါ်သည်။ ဌာန် ၅-ပါး ရှိသည်။
၁။ ကဏ္ဌဌာန် - လည်ချောင်းအရပ်
၂။ တာလုဌာန် - အာစောက်အရပ်
၃။ မုဒ္ဓဌာန် - အာထိပ်အရပ်
၄။ ဒန္တဌာန် - သွားအရပ်
၅။ သြဋ္ဌဌာန် - နှုတ်ခမ်းအရပ်
ထို ဌာန်တို့မှ အသံထွက်ရာတွင် လျှာဖြင့် အထောက်ပံ့ပြုပေးရသည်။ ရံခါတွင် လျှာဖျားဖြင့် ထောက်၍ အသံထွက်ရသည်။ ရံခါ လျှာလယ်ဖြင့် ထိ၍ အသံထွက်ရသည်။ ဤသို့ အသံဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက် အထောက်ပံ့ပြုရသည့် လျှာအနေအထားဟူသော အကြောင်း(ကရဏ)အား ‘ကရိုဏ်း’ (Instruments) ဟုခေါ်သည်။ ကရိုဏ်း လေးမျိုးရှိသည်။
၁။ ဇိဝှာမဇ္ဈ - လျှာလယ်
၂။ ဇိဝှောပဂ္ဂ - လျှာအဖျားအနီး
၃။ ဇိဝှဂ္ဂ - လျှာဖျား
၄။ သကဋ္ဌာန - လျှာအကူညီအထူးမလိုပဲ မိမိ၏ အသံဖြစ်ပေါ်ရာဌာန် သက်သက်ဖြင့် ရွတ်ဆိုမှု
အသံကို ပိတ်၍ ထွက်ခြင်း, ဖွင့်၍ ထွက်ခြင်း, မထိတထိထွက်ခြင်းစသော အသံထွက်ရန် အားထုတ်ပုံ (ပယတန) အား ‘ပယတ်’ (Manner of Articultion) ဟုခေါ်သည်။ ပါဠိသဒ္ဒါကျမ်းတို့တွင် ပယတ်လေးမျိုး ပြသည်။
၁။ သံဝုဋ (ပိတ်၍ ရွတ်ခြင်း) – အ-သရကို ရွတ်ရာတွင် မိမိ၏ ဌာန်ဖြစ်သော လည်ချောင်းသားကို ပိတ်၍ ရွတ်ဆိုရသည်။
၂။ ၀ိဝုဋ (ဖွင့်၍ ရွတ်ခြင်း) – အ-မှ အခြားသောသရများ ( အာ, ဣ, ဤ, ဥ, ဦ, သြ )၊ သ နှင့် ဟ တို့ကို ရွတ်ဆိုရာတွင် ဌာန်ကရိုဏ်းတို့ကို ပွင့်ပွင့် ဖွင့်၍ ရွတ်ဆိုရသည်။ သ နှင့် ဟ တို့ကိုရွတ်ရာတွင် ဌာန် နှင့် ကရိုဏ်းကြားမှ လေကို တွန်းထုတ်၍ ရွတ်ရသဖြင့် Fricative ဟုခေါ်သည်။
၃။ သံဖုဋ္ဌ (စေ့စပ်စွာထိ၍ ရွတ်ခြင်း) – ၀ဂ်ဗျည်း ၂၅-လုံးအားရွတ်ဆိုရာတွင် ဌာန်နှင့် ကရိုဏ်းကို ကောင်းစွာ ထိ၍ လေကို အဆီးအတားပြုပြီး ရွတ်ဆိုရသည်။ အနောက်တိုင်း သဒ္ဒဗေဒတွင် “Stop” ဟုခေါ်သည်။ ခံတွင်းကိုသာပိတ်၍ လေကို နှာခေါင်းမှသာထွက်စေက နာသိက (Nasal Stop) ဟုခေါ်သည်။
၄။ ဤသံဖုဋ္ဌ (စဉ်းငယ်ထိ၍ ရွတ်ခြင်း) – ယ, ရ, လ, ၀ တို့ကို ရွတ်ရာတွင် ဌာန်နှင့် ကရိုဏ်းကို မထိတထိပြု၍ ရွတ်ရသည်။ ၀ဂ်ဗျည်းတို့ကဲ့သို့လည်း စေ့စပ်စွာ ထိခြင်းမပြု။ သ, ဟ နှင့် သရသံတို့ကဲ့သို့လည်း ဖွင့်၍ ရွတ်ခြင်းမပြုပဲ မထိတထိ ရွတ်ရသဖြင့် အကြားတွင်ရှိသောအသံ (အန္တဋ္ဌ) ဟုခေါ်သည်။ တစ်နည်းလည်း သရသံတ၀က် ဗျည်းသံတစ်ဝက်ရှိသော Semi-vowel အသံဟုလည်းခေါ်သည်။ ဗျည်းတို့နှင့် တွဲသောအခါ ယ သည် ယ-ပင့် ( –ျ) သံ၊ ရ သည် ရ-ရစ်သံ (ြ– )၊ ၀ သည် ၀-ဆွဲသံ ( –ွ ) ထွက်သည်။ အနောက်တိုင်း သဒ္ဒဗေဒတွင်ဤ ပယတ်မျိုးအား Approximant ဟုခေါ်သည်။
▪ ပ-၀ဂ် (ပ, ဖ, ဗ, ဘ, မ) နှင့် ဥ, ဦ တို့သည် နှုတ်ခမ်းအရပ် သြဋ္ဌဌာန(Libials)တွင် ထွက်သော သြဋ္ဌဇအက္ခရာများ ဖြစ်သည်။ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကို ထိ၍ ရွတ်ရသော ကြောင့် Bilibals ဟုလည်း ခေါ်သည်။
▪ တ-၀ဂ် (တ, ထ, ဒ, ဓ, န)၊ လ နှင့် သ တို့အားရွတ်ဆိုရတွင် သွားအရင်း - ဒန္တဌာန(Dentals) အား လျှာဖျား (ဇိဝှဂ္ဂ) ဖြင့် တို့ထိ၍ ရွတ်ရသည်။
▪ သွားအရင်း၏ အထက် မို့မောက်နေသောအာထိပ်အရပ် အား မုဒ္ဓဌာန ဟုခေါ်သည်။ ဋ-၀ဂ် (ဋ, ဌ, ဍ, ဎ, ဏ)၊ ရ နှင့် ဠ တို့သည် လျှာကို အနည်းငယ် လိပ်ပြီး၊ လျှာဖျားအနီး (ဇိဝှောပဂ္ဂ)ဖြင့် သွားအရင်း၏ အထက် မို့မောက်နေသော အာထိပ်အရပ် (Aleveolar ridge)ကို ထိ၍ ရွတ်ဆိုရသည့် မုဒ္ဓဇ (Cerebrals) အက္ခရာများဖြစ်သည်။ လျှာကို အနည်းငယ် လိပ်၍ ရွတ်ရ၍ အနောက်တိုင်း သဒ္ဒဗေဒတွင် Retroflex ဟုလည်းခေါ်သည်။ မြန်မာသံတွင် ဋ-အုပ်စုသံတို့အား တ-အုပ်စုသံတို့နှင့် အသံတူရွတ်ဆိုလေ့ရှိကြသော်လည်း၊ ဌာန်ကရိုဏ်းမတူသည်ကို သတိပြု သင့်သည်။
▪ စ-၀ဂ် (စ, ဆ, ဇ, ဈ, ဉ )၊ ယ၊ ဣ၊ ဤ တို့အား ရွတ်ရာတွင် ဋ-အုပ်စုရွတ်စဉ် အာထိပ်အရပ်ထက် အထက်သို့တက်၍ အာခေါင်မာအရပ် - တာလုဌာန (Palatals)သို့ လျှာအလယ်ပိုင်း (ဇိဝှာမဇ္ဈ)ဖြင့် ထိ၍ ရွတ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် စ-အုပ်စုကို ပီပီသသ ရွတ်ဆိုလျှင် မြန်မာသံ (စ, ဆ, ဇ, ဈ ) ဟူသော အသံမထွက်။ ဋ-အုပ်စု အသံနှင့် လည်ချောင်းသံထွက်သော က-အုပ်စု အသံတို့ကြား အာခေါင်သံပါသော (ကျ, ချ, ဂျ, ဃျ) ဟူ၍ ရွတ်ရသည်။
▪ က-၀ဂ် (က, ခ, ဂ, ဃ, င )၊ ဟ၊ အ၊ အာ တို့သည် လည်ချောင်းအရပ်တွင်ဖြစ်သော ကဏ္ဌဇအက္ခရာ (Gutterals)များ ဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင်း သဒ္ဒဗေဒတွင် ဤအသံတို့အား အာခေါင်အပျော့ (Velar) အား လျှာရင်းဖြင့် ထိ၍ ဖြစ်သောအသံဟု ခေါ်သည်။
▪ အချို့အက္ခရာတို့သည် ဌာန်တစ်ခုထက် ပို၍ ရှိနိုင်သည်။ ဧ ကို ကဏ္ဌဇနှင့် တာလုဇ၊ ၀ ကို ဒန္တဇနှင့် သြဋ္ဌဇ၊ ကဏ္ဌဇနှင့် သြဋ္ဌဇ နှစ်နေရာတို့တွင် အသီးသီး ရွတ်ဆိုနိုင်သည်။
▪ ၀-ဂ်ဗျည်းတို့၏ အဆုံး (၀ဂ္ဂန္တ) ဖြစ်သော “င, ဉ , ဏ, န, မ” တို့ကိုရွတ်သောအခါ လေကို နှာခေါင်းမှ ထွက်စေ၍ နှာသံဖြင့် ရွတ်ရသောကြောင့် နာသိက (nasals) ဌာန်ဟုလည်း ခေါ်သည်။
▪ အံ-ဗျည်းသည် အံ, ဣံ, ဥံ တို့မှ သရ၏ နောက်တွင်လိုက်သော သေးသေးတင် ဗိန္ဒုကို ဆိုလိုသည်။ နှာခေါင်းသံပါအောင် ရွတ်ရသော နာသိကဖြစ်သည်။ မြန်မာသံတွင် ပါးစပ်ကိုပိတ်၍ နှာခေါင်းသံပါအောင် ရွတ်လေ့ရှိသော်လည်း၊ နိုင်ငံတကာ အသံတွင် ပါးစပ်မပိတ်ပဲ အင်္ဂလိပ်စာလုံး Sing မှ ‘ng’ အသံကဲ့သို့ ရွတ်သည်။
▪ ‘သ’ နှင့် ‘ဟ’ တို့သည် ဖွင့်၍ရွတ်ဆိုရသော ၀ိဝုဋပယတ်ဖြစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၀ိဝုဋပယတ်ဖြင့်ထွက်သော ဗျည်းသံသည် ဌာန်နှင့် ကရိုဏ်းအကြားလေကို ညှစ်၍ ထုတ်ရသော အသံမျိုးဖြစ်၍၊ အနောက်တိုင်း သဒ္ဒဗေဒတွင် Fricative ဟုခေါ်သည်။ ဒန္တဇဖြစ်သော ‘သ’သံကို ထွက်သောအခါ သွားအရင်း (ဒန္တဌာန) နှင့် လျှာအဖျား (ဇိဝှဂ္ဂ) အကြားလေကို ညှစ်ထုတ်လိုက်ပါက မြန်မာလူမျိုးတို့ထွက်သော သ-သံ မထွက်။ စ-သံ (အင်္ဂလိပ် s-သံ) သာထွက်သည်။
▪ ဤသံဖုဋ္ဌပယတ်ဖြစ်သော ‘ဝ’ ကို သြဋ္ဌဇနှင့် ဒန္တဇနှစ်မျိုးရ၍၊ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ v-သံကဲ့သို့ နှုတ်ခမ်းနှင့် သွားကို မထိတထိပြု၍ ရွတ်ရသည်။ သို့သော်လည်း ၀-ဆွဲကဲ့သို့ အခြားဗျည်းများနှင့် တွဲသောအခါ သရသံဆန်ဆန် (semi-vowel) ဖွင့်၍ ရွတ်ရ၍ မြန်မာအသံ ‘ဝ’ အင်္ဂလိပ်အသံ w-သံထွက်ရသည်။
ဒီဃ (Long), ရသ (Short)
အက္ခရာတို့ကို ရွတ်ဆိုသော ကာလကို မတြာ (meter) ဖြင့်တိုင်းထွာသည်။ မျက်စိ တစ်မှိတ် လက်ဖျစ် တစ်တွက် ကာလကို ၁-မတြာဟု တိုင်းထွာသည်။ ၁-မတြာကြာ ရွတ်ဆိုရသော အသံတို့အား ရသ (သံတို short) ဟုခေါ်၍၊ ၂-မတြာကြာ ရွတ်ဆိုသော အသံတို့အား ဒီဃ (သံရှည် - long) ဟုခေါ်သည်။ “အ, ဣ, ဥ” သရတို့သည် သံတိုသရများဖြစ်၍၊ “အာ, ဤ, ဦ, ဧ, သြ” တို့သည် သံရှည်သရများ ဖြစ်သည်။
သိထိလ (Unaspirated), ဓနိတ (Aspirated)
၀ဂ်ဗျည်းတို့၏ ပထမ, တတိယ နှင့် ပဉ္စမအက္ခရာ (က, ဂ, င, စ, ဇ, ဉ , ဋ, ဍ, ဏ, တ, ဒ, န, ပ, ဗ, မ) တို့အား ခပ်လျော့လျော့ ရွတ်ဆိုရ၍ ‘သိထိလ’ သံပျော့ (Unaspirated) ဟုခေါ်သည်။ ၀ဂ်၏ ဒုတိယ, စတုတ္ထအက္ခရာ (ခ, ဃ, ဆ, ဈ, ဌ, ဎ, ထ, ဓ, ဖ, ဘ) တို့အား ဟ-ထိုးသံကဲ့သို့ လေသံ ခပ်တင်းတင်းရွတ်ဆိုရ၍ ‘ဓနိတ’ သံတင်း (Aspirated) ဟုခေါ်သည်။ ဂ နှင့် ဃ တွင် ဂ သည် သိထိလဖြစ်၍ ခပ်ပျော့ပျော့ဆိုရပြီး၊ ဓနိတဖြစ်သော ဃ အား လေသံတင်းတင်း ရွတ်ရသည်။ ပါးစပ်ရှေ့တွင် လက်ဝါးခံ၍ ကြည့်ပါက လက်ဝါးသို့ လေတိုးမှု အတင်းအလျော့ ကွာအောင် ရွတ်ရမည်။ ရောမအက္ခရာအရေးသားတွင် ဓနိတသံတို့အား h ထည့်၍ ရေးသည်။ ပုံစံအားဖြင့် က ကို k, ခ ကို kh, စ ကို c, ဆ ကို ch ဟု h ထည့်ရေးသည်။
အဃောသ (Voiceless), ဃောသ (Voiced)
၀ဂ်ဗျည်းတို့၏ ပထမနှင့် ဒုတိယဗျည်းများ နှင့် သ-အက္ခရာ (က, ခ, စ, ဆ, ဋ, ဌ, ပ, ဖ, သ) တို့အား ဟိန်းသံ မပါပဲရွတ်ဆိုရ၍ အဃောသ (Voiceless) ဟုခေါ်သည်။ ၀ဂ်၏ တတိယ နှင့် စတုတ္ထ (ဂ, ဃ, ဇ, ဈ, ဍ, ဎ, ဒ, ဓ, ဗ, ဘ) နှင့် (ယ, ရ, လ, ၀, ဟ, ဠ) တို့သည် မြည်ဟိန်းသံ ပါအောင် ရွတ်ရသော ဃောသ (Voiced) များဖြစ်သည်။ လည်ချောင်း အသံအိုးနေရာတွင် လက်ဖြင့် အသာစမ်းသပ်ကြည့်ပါက၊ က, ခ စသော အဃောသသံများကို ရွတ်သောအခါထက် ဂ, ဃ စသော ဃောသသံများကို ရွတ်ဆိုသောအခါ အသံအိုး တုန်ခါမှုကို ပို၍ တွေ့ရပေမည်။
သရဆုံးသံ (Open Syllables), အသတ်သံ (Closed Syllables)
သရဆုံးသော အသံများအား သဒ္ဒဗေဒတွင် သရသံ (Open syllable) ဟုခေါ်သည်။ ပုံစံအားဖြင့် “အ, ၀ါ, မေ, သော” စသော အသံများ ဖြစ်သည်။ ပါဠိဘာသာတွင် ဗျည်းဆုံးသော အသံများမရှိသော်လည်း၊ သရနောက်တွင် ဗျည်းနှစ်လုံးဆင့်သော သံယုဂ် (Conjunct Consonants) လိုက်က အသတ်သံ (Closed Syllable) ဟုခေါ်သည်။ ပုံစံအားဖြင့် “အတ္တ, မဂ္ဂ, သစ္စ” တို့တွင် “အတ်, မဂ်, သစ်”ဟု ဗျည်းနှစ်လုံးဆင့်တွင် အပေါ်ဗျည်း (သို့မဟုတ် ရှေ့ဗျည်း) နှင့် သတ်သော အသံဖြစ်သည်။ အသတ်ဆိုသည်မှာ open syllable များတွင်ကဲ့သို့ သရ၏ လေသံကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖွင့်၍ မထွက်စေပဲ နောက်ဗျည်းသံနှင့် သတ် (Stop) ၍ ရွတ်ဆိုခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ နိုင်ငံတကာပါဠိအသံထွက်တွင် အသတ်သံကို ရွတ်ရာတွင် မြန်မာပါဠိသံကဲ့သို့ အသတ်သံ ပီပီသသ (ပုံစံ အတ္တ = အတ်တ ဟု) မထွက်ပဲ၊ ရှေ့သရသံကို နောက်ဗျည်းသံဖြင့် အုပ်၍ သတ်ပေးရုံသာ (ပုံစံ အတ္တ = အ(တ်)တ) ထွက်ရသည်။
၁။ ရူပသိဒ္ဓိဘာသာဋီကာ ပထမတွဲ - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်
၂။ နိရုတ္တိဒီပနီ - လယ်တီဆရာတော်
၃။ ဌာန်၊ ကရိုဏ်း၊ ပယတ် - ဆရာဉာဏ် [မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှ]
၄။ အခြေပြု ပါဠိသဒ္ဒါသင် - ဆရာဉာဏ်
၅။ Introduction to Pali, A.K. Warder
၆။ A Practical Grammar of the Pāli Language, Charles Droiselle
၇။ Pali – Weikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Pali
၈။ Phonology – Weikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Phonology
Labels: ပါဠိမှတ်စု, ဧရာ
ဘာစီလိုနာသို့ ကုန်းတတန် ရေတတန် ယူဆောင်လာခဲ့ရသော အိုလံပီယာမှ ဤမီးတောက်မီးလျှံသည် စစ်ရပ်ဆိုင်းသော အလံသဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများစုရုံးကာ ငြိမ်းချမ်း ချစ်ကြည်စွာဖြင့် တူညီသောဝါသနာကို လိုက်စားလေ့ကျင့်နိုင်ကြစေရန် တိုက်ခိုက်မှု၊ ရန်ပြုမှု အဖုံဖုံ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ အိုလံပစ်အားကစားပွဲသည် လူသားတို့ ထူးချွန် ပြောင်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းရုန်းကန်သော အသွင်အပြင်တရပ်ကို ဖော်ပြပါသည်။ ဤသို့သော ကြိုးပမ်းမှုသည် ချမ်းသာသုခနှင့် ဆက်နွယ်နေသည်ဟု ရှေးဟောင်းဂရိလူမျိုးများက ရှုမြင်ခဲ့သည့်အလျှောက် ယနေ့ အခမ်းအနားသည် ခေတ်ပေါင်းများစွာမှစ၍ ယဉ်ကျေးသော လူသားများဆွတ်ခူးရန် ရှာဖွေခဲ့သော ဆုကြီးများဖြစ်သည့် ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် ချမ်းသာသုခကို ရည်စူး၍ ကျင်းပသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ကာယစွမ်းအားကို ဉာဏနှင့် စိတ္တစွမ်းအားများနည်းတူ လိမ္မာစွာ ပညာဉာဏ်ဖြင့် ပျိုးထောင်ခြင်းကို အလေးပေးသော ရှေးဂရိတိုင်းသားတို့၏ အမွန်မြတ်ဆုံး စံသတ်မှတ်ချက်သည် အိုလံပစ် ထုံးစံဓလေ့၏ ဇစ်မြစ်၌ တည်ရှိပါသည်။ ကာယ၊ ဉာဏနှင့် စိတ္တဗလသုံးသွယ် သင့်မြတ် ညီညွှတ် လှုပ်ရှားပါက လူသား၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု ဘောင်နယ်နိမိတ်များ ချဲ့ထွင်နိုင်ကြောင်းကို စံချိန်ဟောင်းများ အဖန်တလဲလဲကျိုး၍ စံချိန်သစ်များ တင်နိုင်ခြင်းဖြင့် သက်သေပြနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသန်စွမ်းပြီး စွမ်းရည်သာသော အားကစားသမားများ မွေးထုတ်ရာတွင် ခေတ်သစ် သိပ္ပံပညာကိုမှီးသော ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် လေ့ကျင့်နည်းများနှင့် ကျန်းမာရေးထိန်းသိမ်းနည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ အဓိကကျသည်မှာ မှန်ပါသည်။ သို့သော် နောက်ဆုံး၌ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးစိတ်ဓာတ်သည်သာ အိုလံပစ် သူရဲကောင်းကို အောင်ပွဲသရဖူ ဆောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ခါနီးတွင် အစွမ်းကုန်အားသွန်၍ အကြိတ်အနယ် လုံးပန်းရ၍ နာကျင်လာသည်ကို လျော့ပါးသွားအောင် မည်ကဲ့သို့ လေ့ကျင့်ရပါသနည်းဟု ရွှေတံဆိပ်ဆုရ အပြေးသမားတစ်ဦးကို အမေး ခံရခဲ့ဖူးပါသည်။ ၎င်း၏ အဖြေကား “နာကျင်မှုသည် မည်သည့်အခါမျှ လျော့မသွားခဲ့ပါ။ နာကျင်လျက် ဆက်လက် အားစိုက်သွားနိုင်ရန်ကိုသာ လေ့ကျင့်ထားရပါသည်။” ဘ၀ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ကဲ့သို့ပင် အားကစားကွင်း၌လည်း လူသားတို့သည် မိမိတို့၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု စံချိန်ကို တိုးမြှင့်လိုပါက ခံနိုင်ရည်မွေးကာ မိမိ၏ အားနည်းချက်များကို ကျော်လွှားရန် မိမိကိုယ်တိုင် ပြန်လည် လုံးပန်းရပါသည်။
အကျိုးအမြတ်နှင့် ကျော်ကြားမှုကို မျှော်မှန်းကာ လူသားသည် မတန်တဆ ကြီးမားသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများကို အံတုရန် ကြိုးပမ်း အားထုတ်ကြရပါသည်။ သို့သော်လည်း အကျိုးအမြတ်ကို မစဉ်းစားပဲ စိန်ခေါ်မှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်မည်ဟူသော စိတ်ဓာတ်ကသာလျှင် ပကတိပြည့်စုံသော အောင်မြင်မှုကို ရစေနိုင်ပါသည်။ စစ်မှန်သော အားကစားသမား စိတ်ဓာတ်ကို ကလေးတစ်ဦးက ပြသခဲ့သည်။ မိမိထက် များစွာကြီးသူများနှင့်အတူ ပြေးပွဲဝင်ခဲ့ပြီး စိတ်မလျော့ပဲ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ အားလုံးနောက်ဆုံးမှ ပန်းတိုင်သို့ ရောက်သောအခါ၌ အောင်ပွဲခံသော လေသံဖြင့် “ကျွန်တော် နောက်ဆုံးက နိုင်တယ်” ဟု ကြေညာလိုက်ပါသည်။ စိတ်အားထက်သန်စွာ ပြေးခဲ့သော ပြိုင်ပွဲ၌ ရှုံးနိမ့်ခြင်း မရှိနိုင်ပါ။
စစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သော နိုင်ငံများ ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် ခေတ်သစ် အိုလံပစ်ကို တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာအထူးချွန်ဆုံး အားကစားသမားများသည် အကြိတ်အနယ် ပြိုင်ဆိုင်ကြသော်လည်း သိက္ခာရှိ၍ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် စိတ်ဓာတ်လွှမ်းမိုးသော ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြသောအခါ၌ နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ချက်၊ အရှေ့ အနောက်၊ လူမျိုးနှင့် ဇာတိဆိုင်ရာခြားနားမှုများ မရှိတော့ကြောင်း ပြသခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသော နိုင်ငံတကာ သဟဇာတရရှိရေးကို အားပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက် ဆက်လက် ရှင်သန်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ကျွန်မတို့ကမ္ဘာသည် ယခုတိုင် ဘယ, လောဘ, ဒေါသ, မောဟတည်းဟူသော တံတိုင်းကြီးများဖြင့် ပိုင်းခြားထားခြင်း ခံနေရပါသည်။ လူသားတို့သည် မိမိတို့ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေ၍ မိမိတို့ဆက်လက်ရှင်သန်ရေးအတွက်ပင် အန္တရာယ်ပြုမည့် အင်အားများကို တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိပဲ၊ အချင်းချင်း ပြိုင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်နေသောကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုက္ခပင်လယ် ဝေနေပါသည်။ ကျဉ်းမြောင်း၍ အရာမရောက်သော စိတ်ဓာတ်များကို ဖယ်ရှား၍ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို အသက်သွင်းပေးမည့် စိတ်ဓာတ်များ ဤကမ္ဘာ၌ ပေါ်ပေါက်လာရန်မှာ လွန်စွာလိုအပ်နေပါသည်။
မွေးရာပါ အရည်အသွေးများကို အထူးချွန်ဆုံး အဆင့်တိုင်း ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်မည့် ဘ၀မျိုးအတွက် စိတ်အချရဆုံးသော အခြေခံ အုတ်မြစ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိနှိပ်မှုကြောင့် ပိပြားစိတ်ငြိမ်နေခြင်း၊ တစ်ဖက်သတ် တယူသန် အတွေးခေါ်များ ပိုက်ဖက်ထားသည့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်း၏ ပယောဂကြောင့် မလှုပ်မရှား ငြိမ်သက်နေသည့် စိတ်အခြေနေဟူသည့် သရုပ်ပျက် အတုအယောင် ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးကို ဆိုလိုသည် မဟုတ်ပါ။ တရားမျှတမှု, ကရုဏာစိတ်, ညီညာသင့်မြတ်မှု, ပုဂ္ဂလိက လွတ်လပ်မှု, အများပြည်သူ ထိန်းသိမ်းအပ်သော စည်းမျဉ်းများအတိုင်း ရှိသင့်ရှိထိုက်သော ညီမျှမှု, မိမိနိုင်ငံအပေါ် ထားအပ်သော တာဝန်သိစိတ်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိအမြင် နားလည်မှုမျာကို မျှတအောင်မြင်အောင် ပြုလုပ်မှု စသည်တို့အပေါ်တွင် အခြေခံသော ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးကို ဆိုလိုပါသည်။
အိုလံပစ်မီးရှုးတိုင်သည် အမွန်မြတ်ဆုံးသော စံထားချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များ ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှင့် စိတ်ဓာတ် ပြန်လည်သန့်စင် မြင့်မားစေလိုမှုတို့၏ သင်္ကေတ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်လကြာသောအခါတွင် နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်က လူသားတို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် စတင်ကျင်းပခဲ့သော အားကစားပွဲတော်ကြီးကို ဤနေရာ၌ ခေတ်သစ်အသွင်ဖြင့် ကျင်းပပါတော့မည်။ ၁၉၉၂-ခုနှစ် အိုလံပစ်ပွဲတော်ကြီး၌ နိုင်ငံတကာ အားကစား စိတ်ဓာတ်များနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နားလည်မှု စိတ်ဓာတ်များ အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်နိုင်ပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်း ပို့သလိုက်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ချမ်းသာသုခရရှိရေးဟူသော ပိုမို ကျယ်ပြန့်သည့် ရုန်းကန်မှုကြီး၌လည်း ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများအားလုံး အောင်ပွဲသရဖူ ဆောင်းနိုင်ကြပါစေဟူသည့် အလွန်တန်ဖိုးထားရပါသော မျှော်လင့်ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
[၁၉၉၂-ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့က စပိန်နိုင်ငံတွင် အိုလံပစ် မီးရှုတိုင်ရောက်သည်ကို ကြိုဆိုသော မိန့်ခွန်း ဖြစ်ပါသည်။ မိန့်ခွန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးသားထား၍ သားကြီးဖြစ်သူ မောင်မြင့်ဆန်းအောင်က ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။]
Labels: ဧရာ, ဝေမျှခြင်း
ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေး ကြရာမှာ…
သမိုင်းကြွေးတွေက တရစ်ပြီးတရစ်တင် မနုဿဓမ္မ ဆိုတာ
ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေး ကြရမှာ…
သမိုင်းကောင်း ရေးသူများအား ဦးညွှတ်လျက် ~
မမတို့များ အားကျတယ်။ အမြဲတမ်း အေးဆေးပဲ။
ငယ်သူများထံမှ ကြားရသည့် အသံဖြစ်သည်။
သီတာတို့များ ကုသိုလ်ထူးပါ့။ မနာလိုတောင်ဖြစ်တယ် ဟွန်း။
ရွယ်တူများထံမှ ကြားရသည့် အသံဖြစ်သည်။
ကြီးသူများထံမှ ကြားရသည့် အသံဖြစ်သည်။
အဖေနဲ့ အမေရဲ့ ငါ့သမီး၊ ငါ့သမီး
အကို အမတွေရဲ့ ကျွန်တော့ ညီမ၊ ကျွန်မ ညီမ
တစ်ဦးတည်းသော ညီမလေးရဲ့ ကျွန်မ အစ်မ လေ
ငယ်ငယ်တုန်းက ဆရာမတွေ ရဲ့ သီတာဆိုတာကတော့ ဒီကျောင်းမှာ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်
My life is on the cloud.
မိတ်ဆွေအင်ဂျင်နီယာ အစ်ကိုကြီးက သူ့ဇနီး ရိုးရိုးဘွဲ့ရကို သူ့ရုံးမှာ ခေါ်ခန့်ထားလိုက်တော့ အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ ကျမရှေ့မှာ ချီးမွမ်းလိုက်ပုံက “ငါ့မိန်းမ တော်တယ် တော်တယ်၊ တချို့ B. E တွေတောင်သုံးမရဘူး။” တဲ့
ရှိပါစေတော့လေ ကိုယ့်အရည်အချင်းကလည်း ဘာသာစကားက မရေလည်၊ ထမင်းစားရေသောက်တောင် တစ်ခါတရံ အပေါက်အလမ်း မတည့်ချင်။ Professional ဖြစ်အောင် သင်ခဲ့ရတဲ့ ဘာသာရပ်ကိုလည်း “တပြည်လုံး သုံးစွဲတဲ့ လျှပ်စစ်မီးတောင်မှ အဖိုနဲ့ အမ နှစ်ကိုယ်တွဲမှ” ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားကိုပဲ မှတ်မိတော့တယ်လို့ ၀န်ခံရရင် သင်ပေးခဲ့ရတဲ့ ဆရာတွေ နှလုံး ကြေကွဲဖွယ်ရာပဲ ရှိပါတော့သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ငါ့မှာ အားကိုးရှိသားဘဲ၊ နောက်ပြီး ငါထိန်းကျောင်းရမဲ့ ကလေးတွေ၊ မိန်းမပီသ အိမ်ရှင်မ။
လာပြန်ပါပြီ… အမျိုးသားရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းက “သီတာက ကိုဧရာကို ထမင်းဟင်းတောင် ကောင်းကောင်း ချက်မကျွေးဘူး” တဲ့။ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီဟ။ ပြန်ကောက် ပြန်ကောက် ရှိစုမဲ့စု သိက္ခာတွေ ပြန်ကောက်။
“သီတာ လိုသေးတယ်။ နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ လိုသေးတယ်။ ထစ်ကနဲဆို တစ်ခုခုတော့ ပြန်ပြောလိုက်မယ်။ အော်ပစ်လိုက်မယ်။ ဒေါသနဲ့ချည်းတုံ့ပြန်တယ်။ ကို့ လို ကလျာဏမိတ္တ တစ်ယောက်က အနားမှာ တစ်ချိန်လုံး ပြောပြပေးနေတာတောင်” တဲ့… အားကိုးနေရတဲ့ သူကြီးက
ဒီလိုနဲ့… ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ယောင်ခြောက်ဆယ် ကျမကို သူက ဘာဝါသနာ ပါလဲဟု ကောက်ခါငင်ကာ မေးလာဖူး၏။ ကျမ ကလည်း နှိုင်းနှိုင်းဆဆ စဉ်းစားပြီးမှ လေးလေးနက်နက် ပြန်ဖြေလိုက်ပါသည်။ အနုပညာ ၀ါသနာပါသည် ဟု။ ဒီတော့ သူ ဆီက မှတ်ချက်လိုလို ထွက်လာတဲ့ အသံက “အနုပညာ ၀ါသနာ ပါပေလို့သာပဲ၊ ကလေးတွေကတော့ အကြမ်းပညာနဲ့ချည်း တွေ့နေရတယ်” တဲ့။
အဟီး ဟင့် ဟင့် အင့်
My life is in the drain.
ရိုးရိုးဘွဲ့၊ B.E. တို့သည် လောက အခေါ်အဝေါ်များကိုသာ ကိုယ်စားပြုပါသည်။ နှိမ်ချလိုခြင်း၊ ၀င့်ကြွားလိုခြင်း အလျှင်းမရှိရာ။
ချီးမွမ်း ခံရခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းတို့သည် ဖြစ်ခြင်း သဘောဟု သာခံယူပါသည်။ ချီးမွမ်းသောသူ၊ ကဲ့ရဲ့သောသူ ဟု အလျှင်းမသိရာ။
ကျမသည် မီးခြစ်ဆံဗူးလေးထဲမှ မီးခြစ်ဆံလေး တစ်ချောင်းသာ ဖြစ်လိုပါသည်။ မဲမဲလုံးလုံးခေါင်းကလေးနဲ့ အဲ့ဒီ လောကဓံ ဆိုတာကြီးကို ပစ်တိုက်လိုက်လို့ ဉာဏ် အလင်းရောင် ပွင့်သွားမည် ဆိုပါက မီးခြစ်ဆံလေး ဖြစ်ရကျိုးနပ်ပါပြီ။
အလင်းတိုင်များကို အလင်းကူးနိုင်ရေးမှာ မီးခြစ်ဆံလေး၏ မ၀ံ့မရဲ ဆန္ဒသာ ဖြစ်ပါသည်။